Sesha imikhiqizo nabakhiqizi eChina - ISUYI IMPORT KANYE NOKUTHUTHELISA CO., LTD
1.Sesha imikhiqizo nabakhiqizi eChina
Enye yezinsizakalo ezifuneka kakhulu kuSuyi ukuthola izimpahla eChina. Sinolwazi oluphelele kakhulu ngemakethe futhi sikhetha ukunikezwa okunenzuzo enkulu, kucatshangelwa zonke izidingo zamakhasimende.
Sinikeza usizo ku:
● ukuthola izinto ngokuqondile kubakhiqizi baseChina
● funa imininingwane yamakhasimende ku-inthanethi nasemibukisweni yezimboni ekhethekile
● ukuhlaziywa kwezingxenye zemakethe, ukuqhathaniswa kwekhwalithi yezimpahla ezivela kubaphakeli abahlukahlukene neziphakamiso zamanani abo
● ukuhlola ukuthembeka komhlinzeki
Ukuthola umphakeli eChina kungenye yamaphuzu abaluleke kakhulu okwenza ibhizinisi, okumele aqaliswe ekuqaleni nje kokwakhiwa kwebhizinisi lakho. Kukuphakeli lapho ikusasa nempumelelo yebhizinisi eliqaliwe kuncike khona.
Usebenzisa izinsizakalo zethu, akudingeki ukuthi uchithe isikhathi sakho nobungozi ukuzama ukuzitholela umphakeli ngokwakho.
Ochwepheshe bethu bazothola umkhiqizi onokwethenjelwa wezimpahla onentshisekelo kuzo, akusize uvumelane ngemigomo yokubambisana (intengo, imigomo, imigomo yokukhokha, njll.).
Siphinde futhi sinikeze ukuxhaswa kuzo zonke izinqubo zebhizinisi lakho ngokuqhubeka nokuxhumana njalo nabaphakeli (usizo ekuhumusheni). Le sevisi ikuvumela ukonga isikhathi ekusesheni nasekushintshaniseni i-imeyili. izincwadi ezinezisebenzi zabaphakeli, kanye nokusesha imininingwane ethembekile.